MM Abiy Ahimad: 'Shaffatanii hidhame jechuun fudhatama hinqabu' - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad ibsi kaleessaa miidiyaaleef kennanin dhimmoota kaasan keessaa tokko rakkoo nageenyaa Lixa Itoophiyaatti dhalatee turedha.
Dubbii isaaniin rakkoon nageenyaa gamas ture guddaa fooyya'uu dubbatan. Waamicha Abbootii Gadaan miseensonni duraanii ABO ummatatti makamanis, muraasni hafan rakkoo akka uumaa jiran mootummaan ni himata.
MM Abiy yaada kennanin ''Meeshaa qabatanii, shaffatanii hidhame miidhame himanni jedhu fudhatama hin qabu,'' jedhaniiru.
''Humni hamma tokko Lixa Wallaggaa jiru karaa nagaan Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessatti yoo filannoon mo'ee, aangoo qabachuu danda'a.''
Dursa himachuuf seera kabajuu barbaachisa jechuun biyyaattii keessa eessattiyyuu qaamni socho'u seera hordofee socho'uu qaba jedhan.
Lixa Oromiyaatti maaltu raawwataa jira?
ABO: Imala qabsoo karaa nagaa eegalame
Kanaan ala tarkaanfii cimaa akka fudhatamu ibsuun Lixi Itoophiyaa yeroo darbee irraa nageenyaa tasgabbaa'aa qaba jechuun ibsan.
''Nageenya jijjiirama dura turerraa fooyyee qabu qabaa. Kuni cimee itti fufa. Kan seeraan dhufe seeraan deebisna, seeraan ala kan meeshaan yaadus haaluma sanaan itti deemna,'' jedhan.
'Taateen Waxabajjii 15 baay'ee hamaa ture'
Ajjeechaa jeneraalota lamaa baatii Waxabajjii keessa Itoophiyaa keessatti dhaqqaben kan shakkame yeroo ammaa mana yaalaa jira.
''Kan miidhame morma isaa irra waan ta'eef dubbachuu hin danda'u,'' kan jedhan MM Abiy,'' hanga itti wayyaa'utti wanti haaraa hin argamne,'' jechuun dubbataniiru.
''Tarii yeroo fayyu, odeeffannoon dabalataa argamuu danda'a,'' jedhan. Isaan alatti namoonni shakkaman kaanis argamu himan.
Kanneen keessaa yeroo fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraatti raawwatu nama natti himi jedheefi namni itti hime qabameera jedhan.
Akka MM Abiy jedhanitti wantichi ''waan dursee karoorfamedha.''
Ajjeechaan yeroo darbe 'hamaa ture' jechuun Ministirii Muummee Abiy ibsun waan fashalaa'ef salphisnee hin ilaallu jedhan.
Dhimma ajjeechaan walqabatee ''odeeffannoon hedduu jira'' kan jedhan bulchaan Itoophiyaa, biyya keessas hojjettoota mootummaa dabalatee qarshii, hojii miidiyaafi kaaniin kan gargaaran jiru jedhan.
Leenjii waraanaa kennu, meeshaa bituu, akkasumas ajjeechaan akkanaa akka ta'uuf deemu bira qabani kanneen haasawan dabalate jedhan.
Isa mootummaan ajjeechaa kana hordofee sagalee qeeqa kan kaasan gad qabaa jira isa jedhuf yoo gaafataman dirreen dimookiraasii akka banamu kan taasise mootummaa waan ta'ef gadi qabuuf hojjetaa hin jirru jedhan.
''Taateen Waxabajjii 15 baay'ee hamaa ture. Imala dimookiraasii eegalle duubatti deebisuuf kan balbala banu ture. Akka waan salphaatti ilaalamuu miti,'' jechuun dubbatan.
''Wanti Waxabajjii bultii 15 osoo fashalaa'uu baatee akkuma karoorfameen namoota hedduu irratti osoo ajjeechaan raawwate dhumaatii guddaa fidu danda'a ture.''
Waan fashalaa'ef namoonni salphisanii ilaaluu hin qabani jedhan.
Ajjeechaa raawwate irratti yaadni tokko mootummaan tarkaanfii gahaa hin fudhanne kan jedhu yoo ta'u kaan immoo hidhaan baay'ate kan jedhu dhagahama.
Isa irratti deebii yoo deebisan, sa'aatii 24 keessatti eeruun 1,200 nu dhaqqabeera kan jedhan MM Abiy Ahimad, isa keessaa muraasa qofa to'annoo jala oolchine jedhan.
Kanneen hidhaman 350 keessaa 120 kan tahan hiikamuus dubbataniiru.
Rakkoo Sidaamaatti dhalate
Rakkoo naannoo ta'u Godina Sidaamaa irratti deebii kan deebisan MM Abiy gaaffii Sidaamaa gaaffiin siyaasaa qofa hin deebisu jedhan. Gaaffiin seeraafi gaaffii bulchiinsaas deebi'uu akka qabu eeran.
Kanaafis akka fakkeenyaatti Boordii Filannoo kaasuun humni jaarmiyaa kanaa akka hin cimne himan.
Godinni tokko yeroo naannoo ta'u qoodama qabeenyaa, fi gaaffiin biraas ni ka'a jedhan.
Ummata kaan naanno ta'u gaafatanif dubbii taasisaniin ummatoonni yeroo naannoo ta'uf jedhan faayidaa siyaasaan alatti bu'aa akkami akka fidu dursanii yaaduu qabu jechuun himan.
Torban muraasa dura yeroo qormaata biyyaalessaa dabalatee intarneetiin ciccitaa ture.
''Intarneetiin bishaan miti, qilleensa miti garuu teknooloojii barbaachisaadha,'' kan jedhan Ministirri Muummee Abiy kuni garuu kan ta'uuf wanta gaariif yoo itti fayyadamne qofaadha jedhan.
Garuu, ''intarneetii irratti ajjeesi, jabaadhu, guubi jennee yoo wal ficcisiisna tahe torbaniif miti guttummaattuu cufamuu danda'a,'' jedhan.
Mootummaan lubbuu namaa baraaruufi qabeenyi akka hin barbadoofne gochuuf akka intarneetii cufellee himaniiru. Yeroos garuu qaamni mootummaa as bahee maaliif akka cufame dubbate hin turre.
Kanaafuu, addunyaan biraa kan ofi ilaalee maaliif intarneetiin cufame inni jedhu sirrii miti jechuun biyya Ameerikaatti namni aangoof jedhee obboleessa ofii hin ajjeesu jechuun dubbatan.
Gama kaaniin, haala amma jirun biyyoota Itoophiyaan ollummaa gaarii walin qabdu keessaa Ertiraan tokko ta'u kan himan MM Abiy, walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii bu'uura seeraan akka ta'u hojjetamaa jiraachuu ibsan.